I Groenlanda na Grinlandy na Groenlandy, na Kalallit Nunaat aminny fiteny kalalisota, dia nosy iray ao aminny Ranomasimbe Arktika. Faritany mizaka-tenani Danemarka io faritra io; ka noho izany na dia any Amerika Avaratra aza no misy anilay nosy, ...
Ny velarantany anangonan ny renirano Amazôna dia lehibe indrindra eto an-tany. Eo amin ny 7 000 km 2 eo ho eo no velarany. Manangona ny ranon ny renirano izy manomboka amin ny laharam-pehintany fahadimy any avaratra hatramin ny faharoapolo any at ...
Tanàna lehibe ao atsimoni Alemaina, aminny reniranoni Main i Frankfurt. Manana mponina miisa 724 869 mponina.
I Artisia dia tanàna iray ao aminny distrikani Kgatleng any Botsoana. Ny isam-poniny dia 2 365. Ny laharam-pokontaniny dia 26. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Beetsha dia tanàna iray ao aminny distrikani Ngamiland West any Botsoana. Ny isam-poniny dia 941. Ny laharam-pokontaniny dia 6. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Bere dia tanàna iray ao aminny distrikani Ghanzi any Botsoana. Ny isam-poniny dia 559. Ny laharam-pokontaniny dia 14. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Betesankwe dia tanàna iray ao aminny distrikani Ngwaketse any Botsoana. Ny isam-poniny dia 389. Ny laharam-pokontaniny dia 0. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Bethel dia tanàna iray ao aminny distrikani Barolong any Botsoana. Ny isam-poniny dia 404. Ny laharam-pokontaniny dia 0. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Boatlaname dia tanàna iray ao aminny distrikani Kweneng East any Botsoana. Ny isam-poniny dia 1 049. Ny laharam-pokontaniny dia 31. Ny laharam-pehintaniny dia -23.6 ary ny laharan-jarahasiny dia 25.833333.
I Bobonong dia tanàna iray ao aminny distrikani Central Bobonong any Botsoana. Ny isam-poniny dia 19 389. Ny laharam-pokontaniny dia 82. Ny laharam-pehintaniny dia -21.965545 ary ny laharan-jarahasiny dia 28.436251.
I Bodibeng dia tanàna iray ao aminny distrikani Ngamiland East any Botsoana. Ny isam-poniny dia 778. Ny laharam-pokontaniny dia 0. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Bogogobo dia tanàna iray ao aminny distrikani Kgalagadi South any Botsoana. Ny isam-poniny dia 360. Ny laharam-pokontaniny dia 0. Ny laharam-pehintaniny dia -26.65 ary ny laharan-jarahasiny dia 21.916667.
I Bokaa dia tanàna iray ao aminny distrikani Kgatleng any Botsoana. Ny isam-poniny dia 5 680. Ny laharam-pokontaniny dia 10. Ny laharam-pehintaniny dia -24.45 ary ny laharan-jarahasiny dia 26.016667.
I Bokspits dia tanàna iray ao aminny distrikani Kgalagadi South any Botsoana. Ny isam-poniny dia 507. Ny laharam-pokontaniny dia 9. Ny laharam-pehintaniny dia -26.9 ary ny laharan-jarahasiny dia 20.7.
I Bonwapitse dia tanàna iray ao aminny distrikani Central Mahalapye any Botsoana. Ny isam-poniny dia 635. Ny laharam-pokontaniny dia 1. Ny laharam-pehintaniny dia -23.039177 ary ny laharan-jarahasiny dia 26.637745.
I Borobadilepe dia tanàna iray ao aminny distrikani Barolong any Botsoana. Ny isam-poniny dia 330. Ny laharam-pokontaniny dia 0. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Borolong dia tanàna iray ao aminny distrikani Central Tutume any Botsoana. Ny isam-poniny dia 5 184. Ny laharam-pokontaniny dia 1. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Borotsi dia tanàna iray ao aminny distrikani Central Mahalapye any Botsoana. Ny isam-poniny dia 2 443. Ny laharam-pokontaniny dia 4. Ny laharam-pehintaniny dia -21.057608 ary ny laharan-jarahasiny dia 27.210761.
I Botalaote dia tanàna iray ao aminny distrikani North East any Botsoana. Ny isam-poniny dia 173. Ny laharam-pokontaniny dia 1. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Botlhapatlou dia tanàna iray ao aminny distrikani Kweneng West any Botsoana. Ny isam-poniny dia 1 223. Ny laharam-pokontaniny dia 29. Ny laharam-pehintaniny dia -24.025912 ary ny laharan-jarahasiny dia 25.489756.
I Botlhatlogo dia tanàna iray ao aminny distrikani Ngamiland East any Botsoana. Ny isam-poniny dia 555. Ny laharam-pokontaniny dia 2. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Bray dia tanàna iray ao aminny distrikani Kgalagadi South any Botsoana. Ny isam-poniny dia 1 041. Ny laharam-pokontaniny dia 0. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Butale dia tanàna iray ao aminny distrikani North East any Botsoana. Ny isam-poniny dia 549. Ny laharam-pokontaniny dia 3. Ny laharam-pehintaniny dia -20.715448 ary ny laharan-jarahasiny dia 27.70511.
I Chadibe dia tanàna iray ao aminny distrikani Central Mahalapye any Botsoana. Ny isam-poniny dia 2 973. Ny laharam-pokontaniny dia 11. Ny laharam-pehintaniny dia -21.06532 ary ny laharan-jarahasiny dia 27.347861.
I Changate dia tanàna iray ao aminny distrikani Central Tutume any Botsoana. Ny isam-poniny dia 1 169. Ny laharam-pokontaniny dia 1. Ny laharam-pehintaniny dia -20.324817 ary ny laharan-jarahasiny dia 27.229093.
I Chanoga dia tanàna iray ao aminny distrikani Ngamiland East any Botsoana. Ny isam-poniny dia 347. Ny laharam-pokontaniny dia 0. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Charles Hill dia tanàna iray ao aminny distrikani Ghanzi any Botsoana. Ny isam-poniny dia 3 591. Ny laharam-pokontaniny dia 11. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Chobokwane dia tanàna iray ao aminny distrikani Ghanzi any Botsoana. Ny isam-poniny dia 771. Ny laharam-pokontaniny dia 26. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Chukumuchu dia tanàna iray ao aminny distrikani Ngamiland West any Botsoana. Ny isam-poniny dia 161. Ny laharam-pokontaniny dia 0. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Dagwi dia tanàna iray ao aminny distrikani Central Tutume any Botsoana. Ny isam-poniny dia 454. Ny laharam-pokontaniny dia 0. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Damochojena dia tanàna iray ao aminny distrikani Central Bobonong any Botsoana. Ny isam-poniny dia 993. Ny laharam-pokontaniny dia 3. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Daonara dia tanàna iray ao aminny distrikani Ngamiland Delta any Botsoana. Ny isam-poniny dia 35. Ny laharam-pokontaniny dia 0. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Dekar dia tanàna iray ao aminny distrikani Ghanzi any Botsoana. Ny isam-poniny dia 1 668. Ny laharam-pokontaniny dia 0. Ny laharam-pehintaniny dia -21.533333 ary ny laharan-jarahasiny dia 21.933333.
I Diabo dia tanàna iray ao aminny distrikani Ngwaketse any Botsoana. Ny isam-poniny dia 285. Ny laharam-pokontaniny dia 0. Ny laharam-pehintaniny dia -25.199745 ary ny laharan-jarahasiny dia 25.365763.
I Dibete Station dia tanàna iray ao aminny distrikani Central Mahalapye any Botsoana. Ny isam-poniny dia 1 083. Ny laharam-pokontaniny dia 15. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Digawana dia tanàna iray ao aminny distrikani Barolong any Botsoana. Ny isam-poniny dia 3 296. Ny laharam-pokontaniny dia 1. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Dikgatlhong dia tanàna iray ao aminny distrikani Kweneng East any Botsoana. Ny isam-poniny dia 204. Ny laharam-pokontaniny dia 1. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Dikgonnye dia tanàna iray ao aminny distrikani Kgatleng any Botsoana. Ny isam-poniny dia 431. Ny laharam-pokontaniny dia 2. Ny laharam-pehintaniny dia -24.098327 ary ny laharan-jarahasiny dia 26.002804.
I Dikhukhung dia tanàna iray ao aminny distrikani Barolong any Botsoana. Ny isam-poniny dia 279. Ny laharam-pokontaniny dia 1. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Dikwididi dia tanàna iray ao aminny distrikani Kgatleng any Botsoana. Ny isam-poniny dia 225. Ny laharam-pokontaniny dia 2. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Diloro dia tanàna iray ao aminny distrikani Serowe Palapye any Botsoana. Ny isam-poniny dia 509. Ny laharam-pokontaniny dia 5. Ny laharam-pehintaniny dia -22.351134 ary ny laharan-jarahasiny dia 27.537603.
I Dimajwe dia tanàna iray ao aminny distrikani Serowe Palapye any Botsoana. Ny isam-poniny dia 1 423. Ny laharam-pokontaniny dia 6. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Dinatshana dia tanàna iray ao aminny distrikani Barolong any Botsoana. Ny isam-poniny dia 603. Ny laharam-pokontaniny dia 0. Ny laharam-pehintaniny dia -25.095371 ary ny laharan-jarahasiny dia 25.147249.
I Diphuduhudu dia tanàna iray ao aminny distrikani Kweneng West any Botsoana. Ny isam-poniny dia 535. Ny laharam-pokontaniny dia 0. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Dipotsana dia tanàna iray ao aminny distrikani Ngwaketse any Botsoana. Ny isam-poniny dia 124. Ny laharam-pokontaniny dia 0. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Ditladi dia tanàna iray ao aminny distrikani North East any Botsoana. Ny isam-poniny dia 1 344. Ny laharam-pokontaniny dia 3. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Ditlharapa dia tanàna iray ao aminny distrikani Barolong any Botsoana. Ny isam-poniny dia 653. Ny laharam-pokontaniny dia 0. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Ditshegwane dia tanàna iray ao aminny distrikani Kweneng West any Botsoana. Ny isam-poniny dia 2 114. Ny laharam-pokontaniny dia 16. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Ditshiping dia tanàna iray ao aminny distrikani Ngamiland Delta any Botsoana. Ny isam-poniny dia 139. Ny laharam-pokontaniny dia 10. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.
I Ditshukudu dia tanàna iray ao aminny distrikani Kweneng East any Botsoana. Ny isam-poniny dia 184. Ny laharam-pokontaniny dia 0. Ny laharam-pehintaniny dia tsy fantatra na tsy misy ary ny laharan-jarahasiny dia tsy fantatra na tsy misy.